सुशासन र समृद्धि नारामा सीमित हुने खतरा
March 20, 2018 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । बामपन्थी गठबन्धनलाई जनताले झण्डै दुई तिहाईको मत दिनुका कारण थिए, सुशासन, समृद्धि र स्थायी सरकार । अस्थिर सरकार भएको कारण सुशासन र समृद्धि हाँसिल नभएको आवाज पटक पटक उठेपछि जनताले बाम गठबन्धनलाई मत दिएर मुलुकमा विकासको लहर ल्याउने आशा गरेका थिए । यस अघि के.पी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जे जति गलत र कुशासनका काम भएका थिए, जनताले ती कामलाई भारतले नाकाबन्दी लगाएको घटनासँग जोडेर ओलीलाई राष्ट्रबादी नेताको रुपमा स्थापित गरेका थिए । ओलीले धेरै गर्न खोजेको तर भारतले गर्न नदिएको छाप आमजनत...बाँकी
१९५० को सन्धिमा गृहकार्य खोई ?
January 16, 2018 Posted by Jhilko.com
अञ्जली राई नेपाल–भारत प्रभुत्व समूहको छैठौं वैठक भारतको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एण्ड अनालाइसिस भवनमा पुस २६–२८ मा बस्यो । उक्त बैठकमा प्रमुख रुपले तीन निर्णयहरु भए । पहिलो नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न भारत सहमत, दोस्रो, सातौं बैठकमा परिमार्जनका बुँदाबारे छलफल गर्न सहमत र तेस्रो, समूहको सुझाव ड्राफ्ट लेख्न कार्य शुरु गर्ने । नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धिहरुबारे छलफल गरी दुबै देशका सरकारलाई सुझाव दिन केपी ओली सरकारले २०७२ फागुनमा प्रभुत्व समूह स्थ...बाँकी
अपराधकर्ममा जोडिएका बबन सिंह जस्तै रेशम सांसद् बन्लान् ?
December 29, 2017 Posted by Jhilko.com
दृश्यनाथ ‘खुदा मेहरवान तो गधा पहलवान’ भन्ने कुरा यतिबेला रेशम चौधरीका लागि पर्याय बनेको छ । तर यहाँ खुदाभन्दा पनि ‘जनता मेहरवान तो रेशम पहलवान’ भन्ने नयाँ युक्ति तयार भएको हो । २०७२ भदौ ६ गते ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्रमा एकाएक विजयी भएपछि नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा मात्र नभई, अन्र्तराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालमा उनी निकै ठूलो सेलिब्रेटी वा श्रीलंकाली तमिल नेता लिट्...बाँकी
प्रतिनिधि सभाको छाँयामा प्रदेश सभा
December 28, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । मुलुक अब संघ र प्रदेशको सरकार बनेसँगै तीन तहको राज्य संरचनामा परिणत हुनेछ । निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशित गरेसँगै प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष तर्फको एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० गरी दुई सय ७५ सदस्यको प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ देशभरमा तीन सय ३० प्रत्यक्ष र दुई सय २० समानुपातिक गरी पाँच सय ५० सदस्यको प्रदेशसभा गठन हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको...बाँकी
के हुँदैछ बाम एकता ?
December 26, 2017 Posted by Jhilko.com
एनके दाहाल माओवादी–एमाले एकताको विषय अहिले नेपालको राजनीतिमा ‘हट केक’ जस्तै बनेको छ । कतिपय एकता भइसक्यो, घोषणा मात्र हुन बाँकी छ भन्ने निष्कर्ष सुनाउदै छन् भने कतिपय एकता असम्भव बताइरहेका छन् । माओवादी र एमालेवृत्तमा एकताको यो बहस भुसको आगोझैं सल्किरहेको छ । एकताको पक्षपोषण गर्ने र विरोध गर्नेहरु यो एकताको वैचारिक भन्दा प्राविधिक पक्षको बहसमा केन्द्रित देखिन्छन् । बहसमा उत्रिएकाहरुको स्वार्थका गन्ध स्पष्टै अनुभूत गर्न सकिन्छ । सबैले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप पक्ष बिपक्षम...बाँकी
November 15, 2017 Posted by Jhilko.com
दिपक मैनाली राज्य प्रणालीका सबै अङ्गमा विभिन्न जातजाति, वर्ग र समुदायलाई संख्याका आधारमा सहभागी गराउने प्रणालीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको कार्यमा आफ्नो हैसियत अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन यो प्रणालीले मद्दत गर्दछ भन्ने मान्यता छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्रममा बहुमत ल्याउनेको मात्र नभई थोरै मत ल्याउनेको पनि उचित प्रतिनिधित्व होस् मान्यता समानुपातिकको मूल मर्म हो । तर यस्तो मान्यताका बोकेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट असमानुपातिक बनाउने प्रयत्न भएको...बाँकी
पुँजीवादी व्यवस्था, चुनाव र मताधिकारको प्रश्न
November 08, 2017 Posted by Jhilko.com
 शिला सिंह हामीले मताधिकार निकै संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको नागरिक अधिकार हो । तसर्थ आमजनमानसमा हामीले यत्रो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने भन्ने धारणा रहन्छ । तर यो अधिकार प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने स्वयम्मा विशेष अधिकार छ । यो पनि अरु अधिकारसरह प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय हामी स्वयम् गर्न सक्छौं । जस्तै हामीले निकै लामो संघर्षपश्चात् सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार प्राप्त ग¥यौं भन्दैमा सबैले यो अधिकार प्रयोग ग¥यो भने समाजको स्थिति के होला ? तर त्यस्तो...बाँकी
महिला उम्मेदवारी कमीः पार्टी कि महिलाकै हिच्किचाहट ?
शीला शर्मा संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी असाध्यै न्यून रह्यो । यसो किन भयो ? ३३ प्रतिशत महिला सांसद् संविधानमा अनिवार्यता छ । तर, त्यो कुनै राष्ट्रिय पार्टीले कार्यान्वयन गरेनन्, किन ? पहिलो कारण, पार्टीले नै संकीर्णता अपनायो । दोस्रो, प्रभावशाली महिलाले निर्वाचनमा जाने जोखिम मोलेनन् । समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेर नै आफू सांसद् हुने बाटो रोजे । प्रत्यक्षमा लज्जास्पद महिला उपस्थिति पहिलो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला...बाँकी
पार्टीहरु पाटी हुँदै प्रा.लि.मा परिणत
एकके दाहाल कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको शक्ति आँकलन उसको पार्टी सदस्यताबाट हुन्छ । ‘मास बेस्ड’ पार्टी नै भए पनि नेता–कार्यकर्ताहरुको छनौट विधि पार्टी सदस्यता नै हो । मासबाट नेता छान्ने प्रचलन नेपालमा विकास हुनै सकेको छैन । नेपालमा आफूलाई तथाकथित स्वतन्त्र देखाउने ब्यक्तिहरुले पनि कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता गोजीमा बोकेकै हुन्छन् । एकादुई नहोलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो । अझ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनको लागि त एउटा विधि र परीक्षण हुन्छ । पार्टीले दिएको निश्चित जिम्मेवारी पूर...बाँकी
संयोजकबाट बर्खास्तीपछि विवाद खोज्दै यादव
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा आश्चर्यजनक ढँगले उदाएका सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र विवाद एक अर्काका पर्यायबाची जस्तै बनेका छन । विवादबाट र विवादास्पद भूमिकाबाट उदाएका अध्यक्ष यादवले आफै बिबाद सिर्जना गराउने र त्यसको राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास गर्ने गरेका छन । ‘विवादपछि राजनीतिक उचाई हांसिल गर्नुभएका हाम्रो अध्यक्षले जति विवाद हुन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ भनेर योजना बनाउनु हुन्छ ।’ अध्यक्ष यादवका एक सहयोगीले भने । गौर नरसंहार, अन्तरिम संविधान जलाउने, पार्टी गठन गर्दा अ...बाँकी